Ogaden News Agency (ONA) – Sawiradii iyo Shirsanadeedkii OYSU Finland oo Helsinki ku qabsoomay shalay
Sawiradii iyo Shirsanadeedkii OYSU Finland oo Helsinki ku qabsoomay shalay
waxaa shalay oo ay taariikhdu ku beegnayd 22.9.2012 ka dhacay magaalada Helsinkiee caasimada dalka Finland shirsanadeedkii OYSU finland. Shirkaas oo mudo dheer laga soo shaqaynayey si heersare ah ahna u soo abaabuleen maamulka OYSU oo uu hogaaminayo xogyaha ururka ayaa shalay abaarihii 1200 duhurnimo ka furmay hool weyn oo ku yaala badhtamaha magaaladaHelsinki. Shirkaas oy dhalainyaradu isaga yimaadeen dhmaan gobolada dalkan ee ururku ka dhisanyahay ayaa looga soo qaybgalay sidii loogu talogalay ee qorshuhu ahaa.
Hadaba furitaankii shirka iyo aayado quraanna kadib ayaa laguda galay barnaamijkii laysugu yimid oo ahaa shirsanadeedkii ururka OYSU. Shirsanadeedka ayaa waxaa looga wada hadlay hawlo badan oo horyaalay ururka, waxaanna ka mid ahaa seminaaro kala duwan sida Maamulka wanaagsan, qabyaalada iyo saamaynteeda, ururnimada, muhiimada ya leedahay waxbarashadu iyo ku baraarugsanaanteeda, waxqabadkii ururka iyo waxa u qorshaysan mustaqbalka dhow iyo ka fogba,taariikhda dalkka, doorka ay dhalinyaradu ku leedahay halganka iyo doodcilmiyeedyo kala duwan. Seminaaradaas oy aad ugu maqsuudeen dhamaan kasoo qaybgalayaashii shirka ood wejigooda ka dheehanaysey dadaal, farax iyo raynrayn, iyo barashada joqoraafiga iyo taariikhda dulkooda iyo khayraadkuu ilaahay ku manaystay iyo eegga xaaladuu ku suganyahay. Waxaa soo jeedinayey badi seminaaradaas ubaxa iyo ilayska usoo baxaya dalka iyo dadka Soomaalida Ogadeeniya. Sidookale waxaan iyana meesha joogey oo kaalin fiican ka qaatay masuuliyiin ka mid ah xubnaha JWXO u jooga dalkan Finland. Waxaa iyaguna kaalintooda ka qaatay jaaliyad weynta Soomaalida Ogadeniya iyo masuuliyiintooda oo wada jira.
Waxaa kaloo shirkaas goobjoogtoo ahaa qaybaha kala duwan ee jaaliyad weynta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Finland sida aqoonyahanno musharixiin kakala socday xisbiyada ka jira dalkan una wada sharaxnaa doorashooyinka deegaanka oo dhici doona badhtamaha bisha 10naad ee sanadkan.
Gabagabadii iyo gunaanadkii waxaa kasoo baxay shirkan go’aamo wax ku ool ah waxtarna u leh shacabka Soomaalida Ogadeeniya.
Shir weynahan ayaa kusoo gabagaboobey jawi farxadeed laguna balamay sii anba qaadida hawlaha iyo shaqooyinka halganka hadii eebbe ogolaado.
cabdiraxmaan jarari/ Helsinki Finland